Izindaba - Yini oyaziyo ngokufakwa okuphezulu kwebhokisi lesipho?
Mayelana nencazelo yebhokisi lezipho ezisezingeni eliphakeme, noma ngabe usesho lweGoogle, nalo alunazo izincazelo eziqondile, futhi nencazelo yomuntu ngamunye yehlukile, le ndatshana ixoxe ngebhokisi lezipho eliphakeme, ikakhulukazi lebhokisi lokunamathisela, elidinga inqubo eningi , futhi sidinga ibhokisi lokunamathisela elenziwe ngesandla, okuqukethwe kubhekiselwe kubangani:
Ibhokisi lesipho lingumsebenzi wokwandiswa kwesidingo senhlalo sokupakisha, alinayo kuphela indima yokupakisha futhi ligcizelela ingxenye yendima ngezinga elithile, izinga elihle lebhokisi lesipho liqonde ngqo ukukhulisa inani izimpahla, ngokwezinga elithile, zenze buthakathaka inani lokusetshenziswa kwempahla. Ukuze kuqhakanjiswe inani lomkhiqizo, ulwelwesi olubiza kakhulu futhi oluhle luzosetshenziselwa ukuvikela umkhiqizo. Akukho okupakishwa okujwayelekile kusixhumanisi sokusakazwa okulula kangako, inani lesipho liphakeme kakhulu, izindleko ezisakazwayo ziphezulu impela, njengokukhululeka kokushayisana, ukukhululeka ekuguqukeni nokunye. Akungabazeki ukuthi inethonya eliphezulu kakhulu ekwenzeni ubuhle bezimpahla ukuheha amakhasimende.
1. Ukuhlukaniswa kwamabhokisi ezipho ezisezingeni eliphakeme
Kusukela ekuhlukanisweni kwendwangu yokunamathisela, okubaluleke kakhulu yilezi: iphepha, isikhumba, indwangu, njll.
Isigaba sephepha: kufaka iphepha lekhadibhodi legolide nesiliva, iphepha leparelecent nazo zonke izinhlobo zephepha lobuciko;
Isikhumba: kufaka phakathi indwangu yesikhumba ne-anti-lesikhumba ye-PU, njll.
Indwangu: kufaka phakathi zonke izinhlobo zikakotini nokuthungwa kwelineni.
Kusukela kububanzi besicelo, izigaba eziyinhloko zingamakhemikhali ansuku zonke, iwayini, ukudla, ugwayi, i-elekthronikhi yedijithali, ubucwebe njalonjalo.
Isigaba samakhemikhali sansuku zonke: esetshenziswa kakhulu ezimonyweni, amakha la masimu amabili;
Utshwala: ikakhulukazi iwayini elimhlophe, iwayini elibomvu nazo zonke izinhlobo zewayini langaphandle;
Isigaba sokudla: ikakhulukazi ushokoledi nokudla okunempilo;
Isigaba sogwayi: imikhiqizo yezitolo ezisezingeni eliphakeme yethulwe izinkampani ezinkulu zikagwayi;
I-elekthronikhi yedijithali: njengebhokisi lomakhalekhukhwini lomkhiqizo ophezulu, ibhokisi lekhompyutha yethebhulethi, njll.
Ubucwebe: Ubucwebe bazo zonke izinhlobo ngokuyisisekelo isitayela esiyingqayizivele sokupakishwa kwebhokisi lesipho ukuze kutholakale ubuntu babo.
Inqubo yokukhiqiza yamabhokisi ezipho ezisezingeni eliphakeme
Inqubo yokukhiqizwa kwebhokisi lesipho inzima kakhulu kunokugoqa iphepha lephepha. Ukuqhutshwa kwebhokisi lephepha elisongwayo kuvame ukuphothulwa ngokuqedela, ukuqeda indawo (ukubopha, isiliva, ifilimu, i-UV yendawo, i-convex, njll.), Ukusika ibhokisi lokunamathisela nokunamathisela nokupakisha.
Inqubo yokukhiqizwa kwebhokisi lesipho iqedwa ukuphrinta, indawo yokuqedela impahla die ukusika ibhodi empunga➝ ifa ukusika ibhodi empunga➝ ibhodi elimpunga elenzayo nokwenziwa kokunamathisela ngaphambi kokuhlangana, ukuhlolwa nokupakisha.
Kusukela enqubeni yemikhiqizo emibili, inqubo yokukhiqizwa kwebhokisi lesipho iyinkimbinkimbi futhi inzima, futhi izinga lobuchwepheshe liphakeme kakhulu kunalelo lebhokisi lephepha elisongwayo. Iningi lamabhokisi ezipho ezisezingeni eliphakeme ajwayelekile empilweni yethu yansuku zonke enziwe ngephepha, futhi ingaphezulu lephepha nalo lifaneleka kakhulu ekusetshenzisweni kokwelashwa kwezobuchwepheshe.
3. Amaphutha ajwayelekile namaphuzu wokulawula ikhwalithi
Unqenqemeni oluxegayo: ngemuva kokunamathisela iphepha emaphethelweni amane omzimba webhokisi, ukunamathela akuqinile, futhi kunento emisiwe phakathi kwephepha nebhodi elimpunga.
Umbimbi: Ngemuva kokunamathisela ingaphezulu lephepha ukwakha okungajwayelekile, ubude obuhlukile besibaya esifile.
I-Broken Angle: iphepha lilimele futhi livezwe emagumbini amane ebhokisi ngemuva kokunamathiselwa.
Ukuchayeka kothuli (ukuvezwa phansi): ngenxa yokunemba kokukhiqizwa kwepuleti lommese akulona iqiniso ngokwanele, noma ukusebenza kokunamathisela, okuholela ekutheni ukunamathiselwa kwephepha kusongwe ngemuva kokuhlukaniswa kwesitaki, okuholele ekutheni kuvezwe ipuleti lomlotha.
I-Bubble: Ibhamuza eliphakanyiswe ngokungajwayelekile, elingafani ngobuso ebhokisini.
Amabala okunamathisela: Imikhondo yeglue eshiywe ezindaweni.
Ukuvikeleka: kunezinsalela eziyimbudumbudu ezingxenyeni ezingezansi zento yokupakisha, ubuso bokusekelwa kwendawo, kulimaza ubucayi bendawo yebhokisi.
I-engela ephezulu niphansi: ibhodi empunga isigamu ngokusebenzisa ukusika noma ukugunda, izinhlangothi ezine zesibaya ezakha izinhlangothi ezimbili eziseduze zokuphakama azihambisani.
Amanzi athanjisiwe: ngemuva kokunamathisela umzimba webhokisi, ukuze wenze imiphetho yawo namakhona ahambisane kakhudlwana, kuyadingeka futhi ukusebenzisa iscraper ukuklwebha imiphetho yomzimba womzimba webhokisi, ngoba amandla awekho ejwayelekile, wonke umphetho uzovela ubude, umucu we-concave kanye ne-convex noma i-bubble encane, njengamanzi lukathayela.
4. Isakhiwo esivamile sebhokisi eliphakeme
Ibhokisi lesipho lezinhlobo zazo zonke izinhlobo, kusukela kumaphoyinti akhomba phezulu naphansi ngenhlanganisela yesembozo nefomu lekhava eyisisekelo, eshumekwe ngokuhlanganiswa kwebhokisi le-cartridge, kukhona ukuvulwa nokuvalwa kohlobo lomnyango, uhlobo lwenhlanganisela eboshwe ngokhuni, lezi Izinhlobo zokubeka ukwakheka okuyisisekelo kwamabhokisi ezipho, ngaphansi kohlaka oluyisisekelo, abaklami basungule uhlobo lwebhokisi lama-protein, ekupakisheni imikhiqizo efakwa egameni elipholile, Okulandelayo kuqala kuzona zonke izinhlobo zebhokisi ezijwayelekile negama lokwenza isisho :
1) isembozo nebhokisi lekhava eyisisekelo
Isembozo sekhava nesisekelo sisho uhlobo lwebhokisi. Isembozo sekhathoni sithi “isivalo” kanti ngezansi “isisekelo”, ngakho sibizwa ngokuthi isembozo sesembozo nesisekelo.Isembozo sekhava nesisekelo, esaziwa nangokuthi i-lid nebhokisi lesisekelo, sisetshenziswa kakhulu kuzo zonke izinhlobo zezipho ezinoqwembe oluqinile ibhokisi, ibhokisi lezicathulo, ibhokisi langaphansi, ibhokisi lehembe, ibhokisi lomakhalekhukhwini nezinye izinhlobo zamabhokisi okupakisha
2) Ibhokisi lezincwadi
Igobolondo lakhiwe ngegobolondo nebhokisi elingaphakathi, indandatho yegobolondo yebhokisi elingaphakathi isonto lonke, phansi kwebhokisi langaphakathi nodonga lwangemuva, zombili izinhlangothi zegobolondo zinanyathiselwe ndawonye, ​​nengxenye ephezulu yesembozo unglued ingavulwa, futhi ukwakheka kwangaphandle kufana nencwadi enoqweqwe oluqinile.
3) Ibhokisi lamadilowa
Uma isembozo nebhokisi lekhava eyisisekelo linganikeza umuntu uhlobo lomuzwa onembile, khona-ke ibhokisi lamakhabethe lingenza uhlobo lwemfihlakalo kulowo muntu. Kusho okungaqondakali, ngoba ukubheka ukwakheka kwaso kwenza abantu babe nohlobo lomfutho abakwazi ukulinda ukukhipha ukubukeka ngaphakathi "kwengcebo".
Lesi sifuba samadilowa sazalelwa ukuba sibe ibhokisi lomcebo. Ikhava yohlobo lwekhabethe ibhokisi lakhiwe ngeshubhu, nomzimba webhokisi unjenge-disk, umzimba webhokisi lekhava ibhokisi yizakhiwo ezimbili ezizimele. Ukumodela okwakha kanjalo, ake kuvulwe kube uhlobo lokuzijabulisa. Ukudonsa kancane umzuzu kuba yinjabulo esheshayo.
4) ibhokisi olunamacala
Ukuma kwebhokisi kungu-hexagonal, futhi iningi lalo limbozwe isembozo nesisekelo.
5) Ibhokisi lewindi
Vula iwindi olifunayo ohlangothini olulodwa noma ngaphezulu ebhokisini, bese unamathisela i-PET esobala nezinye izinto ohlangothini lwangaphakathi ukukhombisa ngokuphelele imininingwane yokuqukethwe.
6) Amabhokisi okusonga
Ibhodi elimpunga njengamathambo, nephepha le-copperplate noma elinye iphepha lokunamathisela, ukugoba ibhodi elimpunga ukushiya isikhala sebanga elithile, ukusetshenziswa kwalo lonke kube ukwakheka kobukhulu obuthathu, kungasongwa ngokukhululeka.
7) Ibhokisi lezindiza
Ibhokisi lezindiza, ngenxa yokubukeka kwalo lifana nendiza eqanjwe ngegama, elegatsha lebhokisi, lipakisha ngokusobala, lincamela ukuthumela, lenziwe ngephepha likathayela.
Lezi yizakhiwo zebhokisi lesipho ezivame kakhulu emakethe, futhi kunamabhokisi amaningi akhethekile akhethekile angasho okukodwa.
Njengokufakwa komkhiqizo webhokisi lesipho elijwayelekile emakethe, amabhokisi ezipho ezisezingeni eliphakeme aya ngokuya athandwa ngabanikazi bomkhiqizo. Isakhiwo, izinto zokwakha nobuchwepheshe bamabhokisi ezipho aya ngokuceba ngokwandayo. Ungenza kanjani umsebenzi omuhle ekufakweni kwamabhokisi ezipho nokuphrinta kuyinkinga amabhizinisi wokuphrinta azobhekana nayo ngokuqinisekile.